Safiir Ajnabi ah oo Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in la siiyo Jinsiyadda Soomaaliya
Mogadishu - 14:09:34
Sunday September 01, 2019 - 22:51:46 in Wararka by Super Admin
Safiirka Waddanka Eritrea u fadhiya waddanka Japan ayaa si furan waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga codsaday in dib loogu soo celiyo dhalashada Soomaaliya oo uu sheegay inuu horey u heysan jiray.
Ambassador Estifanos Afwerki oo ah Safiirka Eritrea u fadhiya waddanka Japan ayaa ku dooday in uu dhalashada Soomaaliya la siiyay sanadkii 1983-kii, waqtigaas oo ku beegnayd ka hor burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed.
Boggiisa Twitter-ka ayaa qoraal uu soo dhigay Estifanos wuxuu ku sheegay in uu Madaxweyne Farmaajo kula kulmay garoonka diyaaradaha Narita Airport ee magaalladda Tokyo, isla markaana si naxariis leh uga codsaday in uu ka caawiyo sidii loogu cusbooneysiin lahaa dhalashada Soomaaliya.
"Waxaan Madaxweyne Farmajo weydiistay maanta markii aan ku kulanay garoonka Narita Airport ee Tokyo inuu si naxariis leh iiga caawiyo qaabkii uu iigu cusbooneysiin lahaa jinsiyaddayda Soomaaliya ee la i siiyay 1983-kii, Hal Dad#Eritrea" ayuu yiri Safiir Estifanos.
Illaa iyo haatan wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan kama soo bixin dowladda Soomaaliya, iyadoo intii ay jirtay dowladdii Kacaankana dad badan oo Ajaanib ah ay haysteen Jinsiyadda Soomaaliga.
I asked President FORMAJO today in Narita Airport TOKYO to kindly help me renew my Somali citizenship granted in 1983: One people #Eritrea
— Ambassador Estifanos (@AmbassadorEstif) August 31, 2019